World News Archive | Faaqidaad | Page 2
Home»Archives»World News (Page 2)
Australia oo u hogaansatay hanjabaadii Ruushka
By Editor on 20. June 2017 World News
Australia waxay ku dhawaaqday inay joojisay duqayntii ay ka waday Suuriya taas oo dabo socota hanjabaad uga timi Ruushka xulufada ay xubinta ka yihiin ee Maraykanku hogaamiyo. Wasaarada Gaashaandhiga Australia ayaa sheegtay inay u qaaday talaabadan si ay uga taxadarto isku dhac ciidan, sida ku cad qoraal ay soo saartay maanta oo Talaata ah. Ruushku […]
Somaliland oo la wareegtay orodyahan caan ah
Somaliland waxay ku guulaysatay inay si rasmi ah ula soo wareegto orodyahan Cali Khaliif Galayr, sida lagu shaaciyey shir jaraa’id oo Sabtidii lagu qabtay Hargeysa. Somaliland mudo dheer ayey ku talo jirtay sidii ay ula soo wareegi lahayd Cali Khaliif Galayr oo hogaanka u haya Khaatumo kulana baxay xirfada orodka Cali Bile. Ciidanka Somaliland waxay […]
Military court sentences soldier to death for killing Minister
By Editor on 20. June 2017 ENGLISH, World News
MOGADISHU, Somalia- A Somali military court has on Monday sentenced Ahmed Abdullahi “Aidid” to death for the killing Minister of Public Works and Reconstruction Abbas Siraji in Mogadishu, May 3, Garowe Online reports. Speaking to reporters in Mogadishu, the chairman of Somalia’s military tribunal Colonel Hassan Ali Nour Shuute has announced the final decision of […]
Turkiga oo ciidamo geeyey Qadar
By Editor on 19. June 2017 World News
Guutadii ugu horeeysay ee ciidamada Turkigu waxay gaareen Qadar, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Dooxa. Talaabadani waxay timi iyadoo xiisadi ka jirto Gobolka. Ciidamada Turkigu waxay ka bilaabi doonaan tababarka ugu horeeya saldhiga Tariq bin Ziyad, sida ay ku warantay warbaahinta oo soo xiganaysa warsaxaafadeedka Qadar. Xoogaga Turkigu waxay ku biireen 90 Askari […]
Jarmalka oo ciidankiisa kala baxaya Turkiga
Wasiirka Gaashaandhiga Jarmalka Ursula von der Leyen ayaa u sheegtay warbaahinta inay bilaabi doonaan marka la gaaro bisha Julay inay ciidanka kala baxaan Turkiga. Sida la filayo Sadex bilood ayuu qaadan doonaa dhaqdhaqaaqa ciidanka Jarmalku kaga baxayaan Turkiga ayna ugu wareegayaan fariisin cusub oo ku yaal dalka Urdun. Ursula von der Leyen waxay sheegtay ilaa […]
Ruushku wuxuu si adag ugu hanjabay Maraykanka
Ruushku wuxuu ka baxay heshiis uu kula jiray Maraykanka oo muhiim u ahaa in aysan isku dhicin diyaaradaha kala duwan ee duqaynta ka wada Suuriya, kaas oo fursad u siinayey inay si joogta ah u xiriiraan. Maraykanka ayaa soo riday Axadii diyaarad dagaal oo ay lahayd Suuriya. Ficilkaasi wuxuu ka caraysiiyey Moosko oo kaga jawaabtay […]
Iiraan oo gantaalo ku duqaysay Suuriya
Iiraan waxay ku riday Axadii gantaalo ballistik ah bariga Suuriya, halkaas oo ay ku bartilmaameedsatay maleeshiyaad, sida ay ku warantay wakaalada wararka ee Tasmin. Iiraan ayaa qaaday weerarkan oo aargudasho u ah weerar todobaadkii hore lala beegsaday Tahraan oo ay ku dhinteen 18 qof, masuuliyadiisana ay sheegteen kooxo ku sugan Suuriya. Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah […]
Sucuudiga oo diiday inuu Turkiga siiyo saldhig ciidan
By Editor on 18. June 2017 World News
Sucuudigu wuxuu diiday inuu Turkigu saldhig ciidan ka dhisto boqortooyada, isagoo yiri “Ma ogolaan karo” Ankara inay ka samaysato xarun noocan oo kale ah dhulkayga, sida ay ku warantay Wakaalada Wararka dalkaas. Wakaalada Wararka Sucuudiga ee SPA oo soo xiganaysay masuul ka tirsan Riyadh ayaa ku warantay Sabtidii in aanay Boqortooyadu soo dhoweyn doonin Saldhig […]
Eritrea oo dhul ka qabsatay Jabuuti
By Editor on 16. June 2017 World News
Jabuuti waxay ku eedaysay Eritrea inay Jimcihii qabsatay dhulkii lagu muransanaa ee ku teedsanaa xuduuda, markii ay Qadar kala baxday ciidankii halkaas uga joogay nabad ilaalinta. Wasiirka Arrimaha Dibada Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in ciidanka la geliyey heegan ayna cabasho u gudbiyeen Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay wuxuu […]
Merkel oo dhaleecaysay Maraykanka
Raysal Wasaaraha Jarmalka Angela Merkel waxay ka welwelsantahay hindisaha uu Aqalka Sare ee Maraykanku ku saarayo cunaqabataynta Ruushka inuu saamayn ku yeesho dhaqaalaha Midowga Yurub, Sida uu sheegay Jimcihii Afhayeenkeeda. Arbacadii ayuu meel mariyey Aqalka Sare ee Maraykanku cunaqabatayn cusub oo ka dhan ah Ruushka, taas oo saamayn doonta mashaariic dhinaca tamarta ah oo ay […]